Wepamusoro gumi neRussia Russian Sites Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(786 mavhoti, avhareji: 4.00 kubva 5)
Loading ... Kubhejera kwave kwakava imwe yezvinetso zvikuru zvematongerwo enyika kuHurumende yeRussia kubvira pakutanga kwezana remakore re21 nekuda kwekuwedzera kwenhamba yemashonga ekubheja uye dzimba dzemari. Casinos yakatanga kupararira munyika yose, iyo yakakonzera kushushikana kwevakuru vakuru vemunharaunda, iyo yaishushikana nevechidiki.
Flag of RussiaCurrently, kubhejera Russia iri pamutemo dzakawanda remunharaunda nyaya nzvimbo. Makore mashoma apfuura - mu 2009 - zvakanzi akaparidza sezvo zvisiri pamutemo muna mamwe ndima munyika senzira reRussia muchinyatsongwarira Anti-yokubhejera itsika.
Vane hurumende munyika iyi havana kumbobvira vatsigira mabasa ekubhejera webhupu, iyo yakava chikonzero nei vatambi vanogona kusvika kune dzimwe nzvimbo dzepaIndaneti dzakachengetedzwa sezviri pachena.
List kuti Top 10 New Russian Online Casino Sites
History of Gambling Regulation muRussia
Mhando dzose dzekubhejera dzairambidzwa zviri pamutemo mu1928 uye kupfuura nguva apo Russia yakaiswa pasi peSoviet Rule. Izvi zvakaguma kusvika pakuguma kweZXNUM, apo mamwe mimwe mitemo yakawana kuburikidza nekuchinja. Mu 1980, nyika yakaita slot makamiti mune dzimwe nzvimbo chete. Kubvumirwa kubhejera kwakanyatsosimbiswa mu1988.
Munguva pakati 1989 uye 2002 yaiva nguva unopinza kuwedzera kwenhamba playing uchishanda munharaunda Russia, pamwe pamusoro 50 kubheja dzimba dziri kumhanyira muMoscow oga. Izvi Anofarira kuvaraidzwa akazova uye akakurumbira zvikuru pakati vagari vemo, asi nyika Regulations yaiva nekaupenyu murombo, zvaakatadzisa Hurumende munyika kutora kwokukurumidzira matanho kudzora basa.
Izvi kunotora kusvikira 2006, kana mutemo wakarambidza marudzi ose paIndaneti kubhejera munyika yakanga akapfuura Hurumende Russian. Kusvikira zvino, vatengi emo inopiwa ne kuwana vakawanda zvokubheja Websites.
In 2009, kubheja akanga pamutemo dzinokwana zvikamu zvina yenyika; Kaliningrad Oblas, Altai Krai, Primorsky Krai uye Krasnador Krai. Nezvagara Zviripo kusvikira papera makore matatu. In 2012, repaIndaneti kubhejera kurambidzwa munyika akaendeswa mutongo Supreme Court of Russia, iyo yaiti Websites paIndaneti kubhejera rinobatsirwa 'rinofanira akarwiswa munyika imwe danho kuvonga.
The Roskomnadzor - Kunyora rinotaura zvose Websites akaziviswa sezvo zvisiri pamutemo nehurumende yeRussia - akaitwa pachena gare gare muna 2012. The Pamazita zvinosanganisira kwemashoko akazara pamusoro dzinoverengeka nzvimbo dzaidzidziswa dzakawanda nokubheja dzaishandisa. Izvi zvakaita kuti vamwe mazita kupfuura ari indasitiri kuvhara kuwana Websites dzavo vatengi Russian, asi dzimwe dzaishandisa achiri kupa minamato yavo munyika.
Paiva zvachose kurambidzwa pamusoro kubhejera kare USSR, pashure kubheja kurambidzwa vaiva zvishoma anoputsa, kunyanya munzvimbo vakanga kazhinji ashanyirwa vashanyi. An kuwedzera dzokubhejera uye vachitamba dzimba dzakanga zviwanikwe kusvikira kubheja kurambidzwa ukashingairira nehurumende muna August 1989 uye wokutanga uchitamba mutambo wacho nzvimbo muMoscow yakavhurwa.
Zvisinei, murombo murau, kuongorora uye kudzora kubhejera mabasa ari mundima nyika yakava chikonzero nei kubhejera akatanga kukonzera zvinetso zvikuru kuti Government. Izvi zvakaita kuti muhombe rokuchinja Russian kubhejera mitemo iri 2009.
Kubheja mabasa panyama dzokubhejera zvave wairambidza munyika kuti hafu gumi zvino.
Sezvataurwa pamusoro apa, kubhejera Russia iri pamutemo inonyoreswa munharaunda dzakawanda riri kure dzenyika. nharaunda ava: Kaliningrad Oblast, Azov-City (chikamu Rostov Oblast akanga kunze kubva pasi), Altai Krai uye Primorsky Krai.
Primorsky Krai inofungidzirwa zvakanyatsosarudzwa kuitira kuti tibatsire pamusika wekuAsia unobudirira. Iyi nzvimbo iri pedyo nemuganhu weChinese, iyo inopa hurumende yemunharaunda nemukana wekukwezva vaAsia vakawanda vanoenda kune imwe nzvimbo.
Kunewo anoronga kuti Super playing rakamiswa pedyo Vladivostok kuti ari aiming pa kukwezva zvakawanda vatambi kuti nharaunda.
Muna December 2014, zvakava pachena kuti President Vladimir Putin akapa mitema chiedza kuwedzera nhamba remunharaunda nyaya an, izvo zvakazoita kupinda kusanganisira Crimea uye Sochi pamazita.
kubheja Online, Ukuwo, rarambidzwa zvakazara munyika. Izvi zvinoshandawo kurarama kubheja mabasa mune mamwe ndima reRussia. The nyika wokuti haaratidzi nenzira ipi kuti pangava kuchinja mitemo izvi chero nguva nokukurumidza munguva yemberi iri pedyo.
Pari, kubhejera Russia rave shaky pasi, sezvo ayo ikasadzorwa, chido uye havaratidzi Monitored simukai kwakaguma kubheja kukuru matambudziko pakati vomunzvimbo uye kunyanya vechiduku.
Munyika, zvisinei, pane bhenji ye federal, iyo inotenderwa. Ijiti inopa vatambi mukana wekubhadhara nemaziti maviri ehurumende-Gosloto uye Sportloto. Dzimwe shanduko dzakaitwawo mumitambo yekutengesa mabhizimusi, pamwe nekushandiswa kwemalayisensi chaiwo aidiwa nevashandi.
Gambling Regulation uye Zvepamusoro muRussia
Gambling Mitemo muna RussiaCurrently, Hurumende Russian anoita chikuru mamiriro mitemo mabasa ose uye chekuita nokubheja. Pane yeUnited Executive sangano iri kodzero kuita mamwe mabasa kuitira kuti akuteerere mureza uye pamutemo murau panyaya yokubhejera sangano.
Uyezve, dzimwe hurumende Executive zviremera vane zvimwe competences chokuita kuzvidzora uye odhita zvinhu izvozvo. Several nehurumende miviri constituent masangano enyika vane uyewo simba nemabasa uchitamba mutambo mapazi zvakanaka uye murau.
Maererano mitemo Russian, kubheja mabasa anogona wakarongwa pamutemo masangano, izvo vakanyorwa tsamba nemitemo uye pachishandiswa chinozoiswa ne Russian Federation. No pamutemo masangano, izvo chokuita nyika pachayo, munyika constituent masangano kana hurumende zviremera zvomunzvimbo Anopiwa mukana kuronga uye vachibatirira kubheja mabasa uye kushandiswa.
Pane zvina uchitamba mutambo munyika dzine kuumbwa kunyorerana mitemo Russian Federation. Mushure President Putin vakabvumirana ichiwedzera nhamba chaiyo uchitamba mutambo munyika dzine, zvakadai anotarisirwa kuti akamisa mukati Altay, Kaliningrad uye Primorie, uyewo pamuganhu pakati Krasnodar nharaunda uye Rostov nharaunda.
The Hurumende ndiko kuva simba rokusika uye kugumisa munhu uchitamba mutambo vematunhu, uyewo kusimbisawo AD kuisa mazita ari munyika dzine ', nemiganhu uye mamwe maitiro pasi chibvumirano sungano hurumende miviri iri constituent masangano.
The kuitika Zviremera akakodzera kuti vanekodzero pamwe vakawanda kugona pamusoro chero mhando kubheja mabasa ari munharaunda Russia ndiyo Hurumende Bazi rezveMari of Russian Federation.
The Federal Tax Service munyika iri kupiwa mamwe mabasa kunyoresa bookmaking dzaishandisa, totalizators uye vachitamba pfungwa. Uyewo basa pakuongorora hwokugadzira mamiriro kubhejera michina. Vamwe mabasa chaiwo vari akaratidzwazve zvimwe zviremera, kana totaura kudzora, kuongorora uye murau pakati ekupedzisira kuti vakawanda kugona.
Chikuru zvemitemo chiito kuti inorondedzera zvinokosha kubhejera kuRussia uye zvinopa pamutemo negadziriso kuti kubhejera mabasa uye mabasa munyika ndiwo Federal Mutemo December 29th, 2006 No. 244-FL.
Sezvataurwa pamusoro apa, mashoko Gambling Mutemo anodana marudzi ose kubheja zvisiri pamutemo, asi mhando vari yaidzorwa dzakananga mashoko uye mamiriro ezvinhu kunyanya akaita yokubhejera zvikamu.
Kune zvakare kune akati wandei ari pasi pemitemo inoiswa iyo inopa zvirinani kutsanangurwa uye tsananguro kune izvo zvinodiwa uye maitiro anoitwa muMutemo weGambling. Nekudaro, iyo mutemo inoenderana nemitemo yelotari ndeimwe yoga. Lottries inodzorwa neFederal Law "Pamatirotari" yaNovember 11th, 2003 kwete. 138-FZ.
Online Gambling muRussia
Online Gambling mu RussiaConsidering zvinonyatsorehwa mamiriro Zvokubhejera kuRussia, online kubheja zvakare chekuita kuwedzera nezvokunetseka. Saka, hazvishamisi kuti paIndaneti kubhejera Russia iri sezvo zvikuru sevanhu nyika anotsanangura dzokubhejera mabasa. The web-inobva kubheja mabasa dziri kushingaira kurambidzwa.
Kupfuura makore gumi apfuura - muC2006 - kutamba mitambo yemukana kwakarambidzwa nemaitiro nemitemo yenyika. Poker, zvisinei, inoramba iine grey nzvimbo nekuda kwekukurukurirana kana kana kwete iyo unyanzvi kana mutambo wezvakanaka.
vatambi munharaunda-kwakavakirwa vakakwanisa kuwana kuwaniswa mhiri kwemakungwa rinobatsirwa 'Websites, hapana nyaya yokuti ISPs kunge akakumbira chaivharidzira Websites kuti vane ukama nokubheja.
0.1 List kuti Top 10 New Russian Online Casino Sites
2.1 History of Gambling Regulation muRussia
2.3 Gambling Regulation uye Zvepamusoro muRussia
2.4 Online Gambling muRussia